လူစီဖာရာသီ ၅၊ အပိုင်း ၇ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းနှင့်ယူဆောင်ခြင်း - ဒန်သည်လူစီဖာကိုရိုက်သည် - လူစီဖာ
လူစီဖာရာသီ ၅၊ အပိုင်း ၇ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းနှင့်ယူဆောင်ခြင်း
Lucifer Season5Episode7Recap
ရာသီ7သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဒိုင်ယာရီ Netflix
LUCIFER Cr ၏အပိုင်း ၁၀၇ တွင်လူစီဖာ MORNINGSTAR အဖြစ်လူစီဖာ (L မှ R သို့) TOM Ellis အဖြစ် ယောဟနျသ P. FLEENOR / NETFLIX © 2020
Netflix သည် The Haunting of Bly Manor ၏ပထမဆုံးမြင်ကွင်းနှင့်ပိုစတာကိုမျှဝေသည် Lovecraft နိုင်ငံဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ မှအကြီးမားဆုံးအချိန် ၅ ခု
လူစီဖာရာသီ ၅၊ အပိုင်း ၇ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း: Our Mojo
၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှဒုတိယ လူစီဖာ ရာသီ ၅၊ အပိုင်း ၁ သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အပိုင်း ၁ အပြီးသတ်ဖြစ်ရန်သေချာသည့်သော့များကိုရွေ့လျားစေခဲ့သည်။ ဤတွင်ထိပ်တန်း takeaways များမှာ!
မိုက်ကယ်ကရုပ်ပုံကနေထွက်သွားတာကိုငါတို့တစ်ယောက်မှယုံကြည်ခဲ့တာလား။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး! ကောင်းကင်တမန်မင်းမိက္ခေလသည်ပြန်နှင့်သူအသစ်တစ်ခုအစီအစဉ်နှင့်အတူပြန်လာရဲ့။ ဒီတစ်ခုအလုပ်လုပ်မလား ထွက်ရှာတွေ့မှတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း!
အရာအားလုံးသည် actin-packed မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းအဲလာသည်အကြွင်းမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်မကြာခင်မှာငါတို့စကားပြောကြမလဲ အဘယ်သူသည်လူစီဖာရဲ့ mojo ဤမျှလောက်များစွာသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်နည်း
ထိပ်ဆုံးလက်ဆောင် ၅ ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mojo အမည်ရဇာတ်လမ်းတွဲ ၇ ကိုပြန်လည်မှတ်မိကြစို့။ ဘယ်အကြိုက်ဆုံးလဲ။
လူစီဖာရာသီ ၅ မှအပိုင်း ၅၊ အပိုင်း ၁ - အပိုင်း ၇
အဲလာသည် Deckerstar stan ဖြစ်သည်
ကျနော်တို့အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်ဖြစ်ပါသလားအဲလာသည် ကျောက်တံတား Stan? သူမသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ပဲ! သူမနှင့်လူစီဖာတို့သည်နောက်ဆုံး၌လိင်ဆက်ဆံမှုရှိပါသလားဟုအယ်လာက Chloe အားမေးမြန်းသောအခါ Chloe ကသူမကိုပြောပြသည်။ သူမက Chloe ကိုသူမက Deckerstar ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုပြန်ဖျက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့သင်နဲ့ကျွန်မနှစ်ယောက်စလုံးအယ်လာ။
မင်းရဲ့ mojo ကဘာလဲ?
အထူးညဥ့်နက်ပိုင်းဖြစ်သောမနက်ခင်းတွင် Chloe သည်လူတို့၏အမှောင်ဆုံးသောဆန္ဒများကိုလူတို့အား ၀ န်ခံရန်စွမ်းရည်နှင့်နှိုးလိုက်သည်။ အကျွမ်းတဝင်အသံလား သူမသည်မတော်တဆလူစီဖာရဲ့ mojo ခိုးယူ!
လူစီဖာသည်သဘာဝကျကျထွက်ပေါ်လာသည်။ မိမိအ mojo ဖြစ်ခဲ့သည် သူ ဒါပေမယ့် Chloe ကချစ်တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအဲဒါကိုလူစီဖာအပေါ်မှာသာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့တိုင်၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတွက်ဆရန်ကြိုးစားသည်
စီးရီးရှိဇာတ်ကောင်များထဲမှ Amenadiel သည်စကားပြောရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်တွေချထား။ Amenadiel သည်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ပေးသည်! သူက Maze နဲ့ထိုင်ပြီးအားပေးစကားပြောတယ်။
Amenadiel က ၀ တ္ထုကိုနတ်ဆိုးတစ်မျိုးတစ်ခါမှမပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးလို့ပြောတယ် မာရ်နတ်သည်လူကိုချစ်သကဲ့သို့ကောင်းကင်တမန်တွင်လူသားတစ် ဦး နှင့်ကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါက Maze ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ သူမနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်။
ညံ့ဖျင်းသောဒန်! သတင်းဆိုးကသူ့အတွက်လာနေတယ်။ လူစီဖာနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုလေ့လာပြီးနောက် Charlotte ၏သင်္ချိုင်းသို့သူသွားခဲ့သည်။ သူသည်သူမမည်မျှလွမ်းဆွတ်ပြီးအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသည်။
အရှက်မရှိသောရာသီ7netflix ပေါ်လာသည့်အခါ
မိုက်ကယ်သည်ကောင်းကင်တမန်မင်းပုံသဏ္ဌာန် (အဘယ်သို့သောလှည့်ကွက်) ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်မင်းမိက္ခေလ၊ လူစီဖာ၏အစ်ကိုဖြစ်သူဖြစ်သည်။ သူချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်ဟုဒန်အားပြောခဲ့သည်။ သူ့အစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတာမကြာခင်မှာငါတို့သိတော့တယ်။
လူစီဖာသည်အမှန်တကယ်မကောင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးဒန်သည်လူစီဖာ၏အိမ်တွင်မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာပြီးရင်ဘတ်တွင်သူ့ကိုပစ်လိုက်သည်။ Chloe အဆိုးဆုံးကိုကွောကျရှံ့ Lucifer ရဲ့ဘေးထွက်ပြေး!
ငါ့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒန်ကိုအရူးလုပ်ချင်တယ်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ကျနော်တို့ယောက်ျားကိုတကယ်အပြစ်တင်နိုင်သလဲ စတင်သူများအတွက်ဒန်နှင့်လူစီဖာတို့သည်မည်သည့်အခါကမှအမှန်တကယ်ဆုံတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ကအချိန်လေး, သေချာပေမယ့်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမစစ်မှန်သောခင်မင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ငါဒန်နှင့် Amenadiel ပိုကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများကများမှာပြောချင်ပါတယ်။ လူစီဖာသည်စာတန်၏အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်ခြင်းသည်မည်သူမဆိုအားထိတ်လန့်စေလိမ့်မည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သတိရသကဲ့သို့, Chloe ဖြစ်စေ, အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တစ် ဦး တည်းသာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ, ပြီးတော့ အပိုင်း2သတ္တဝါများအတွက်ချောင်းမြောင်း !
ရေနွေးငွေ့ လူစီဖာ ရာသီ 5, Netflix အပေါ်အပိုင်း 1 ။
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးလူစီဖာ 10 ဖြစ်စဉ်များ
netflix အပေါ် bachelorette ဖြစ်ပါတယ်
နှလုံးရာသီ 12 လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
haikyuu ရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အဘယ်အရာကိုဇာတ်လမ်းတွဲ daredevil သည်သူ၏မတ်မတ်ရပါဘူး